The Nokia 5.1 Plus ọkọkpọhi gam akporo 10 update | Gam akporosis
HMD Global, ebe tọhapụrụ gam akporo 10 update ka Nokia 1 Plus y Nokia 3.1 Plus na njedebe nke Eprel na ụbọchị ole na ole gara aga, n'otu n'otu, ị na-enye OTA akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na OTA na-agbakwụnye sị sistemụ arụmọrụ sistemụ Nokia 5.1 Plus, ọnụ ahịa na-ajụ ọkara nke ghọrọ ọkwa na ahịa na July 2018 nwere ezigbo uru ego.
Companylọ ọrụ Finnish, dịka anyị kwurula n'oge dị iche iche, bụ otu n'ime ihe kachasị ngwa ngwa mgbe a bịara n'inye ụdị gam akporo ọhụrụ maka ụdị ya, ihe ọtụtụ ndị ọzọ ga-e imitateomi. Ya mere, dịka o kwere nkwa, OS OTA na-agbasa n'ụwa niile maka elekere ole na ole maka ụdị obi ụtọ.
Android 10 na-abịa Nokia 5.1 Plus
Juho Sarvikas bụ onye isi ọrụ ndị nrụpụta nke mere mkpọsa mwepụta nke mmelite gam akporo 10 maka Nokia 5.1 Plus. Nke a sitere na ntanetị mmekọrịta Twitter, usoro nke agwa a na-ejikarị maka ụdị mgbasa ozi a.
A malitelarị gam akporo 10 maka Nokia 5.1 Plus! Gaa na obodo anyị iji nweta nkọwa zuru ezu ma lelee nnweta dị na mba dị iche iche
- Juho Sarvikas (@sarvikas) Nwere ike 19, 2020
Nwelite ohuru a bu 1,32 GB n'ogo ma bia na onodu nchedo nke April 2020. N'okpuru ebe a bụ mgbanwe mgbanwe zuru ezu nke ụlọ ọrụ nyere banyere ngwugwu ngwa ngwa ọhụrụ a:
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị: were ya nwayo na anya gi.
Smart azịza: ịzọpụta oge na-atụ aro omume.
Ogbugbu ngagharị: ileghara na slide.
Agbakwunyere nzuzo na njikwa ebe.
Ihe nchedo Google (2020-04).
N'oge a, a na-ekesa mmelite maka smartphone ụwa niile, yabụ, ọ bụghị mpaghara niile kwesịrị ịnata ya n'ụwa niile. Otú ọ dị, nke a ga-abụ ruo mgbe Mee 24; Mgbe ụbọchị ahụ gasịrị, ndị Nokia 3.1 niile ga-enwe Android 10 dịnụ site na OTA dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia 5.1 Plus na-enweta mmelite gam akporo 10
Ngwa 3 kachasị mma maka arụmọrụ gị